I-Hard Cargo Transportation-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>Isisindo Esindayo>Ezokuhamba Kanzima Zemithwalo
Kumaphrojekthi wobunjiniyela bamanye amazwe, ukuthuthwa kwamakalishi asindayo futhi agcwele ngokweqile kudinga izindlela ezahlukahlukene zokuhamba, ezinqunyelwe izindlela zokuhamba, umthamo wokuphakama, izimo zomgwaqo, umgwaqo kanye nomthwalo webhuloho wokulayisha, ububanzi nokuphakama komhubhe kanye imithetho yasendaweni nokunye., Kwenza inqubo yokuhamba ibe nzima futhi ibe yinkimbinkimbi. Ungakuqeda kanjani ukuthutha ama-cargos asindayo futhi asindayo ngokweqile, ngokwezomnotho, ngokuphumelelayo nangokunengqondo kuyisihluthulelo sokwenza kahle umsebenzi weprojekthi yobunjiniyela.
Izimpawu Zokuhamba Kakhulu Kwezimpahla Zohambo
Ngokuchuma kwamaphrojekthi wobunjiniyela obukhulu, ukuthuthwa kwama-cargos asindayo nokwedlula ngokweqile kunezimpawu zawo ngaphandle kokufana nama-cargos ajwayelekile.
Izidingo ezi-1.High zezimo zomgwaqo. Ngenxa yokuthandwa kwe-cargos, kuyadingeka ukuthi ucubungule izimo zomgwaqo kusenesikhathi, kufaka phakathi imikhawulo yokuhamba kwamabhuloho kanye nemigwaqo endleleni, izithiyo eduze komgwaqo njalonjalo. Kuyinzuzo ukukhetha indlela enezimo ezinhle zomgwaqo, amabhuloho ambalwa nemikhawulo embalwa.
2. Unicity and unidirection. .Ngokuthi i-cargos esindayo nenobukhulu obukhulu ngokwejwayelekile ihlelwa ngokwezidingo ezahlukahlukene zephrojekthi, kumele kwenziwe uhlelo oluhlukile lwenqubo ngayinye yokuhamba. Futhi ngenxa yezici zomjikelezo wokukhiqiza wesikhathi eside nesilinganiso esikhulu, izinto zokuhamba ikakhulukazi azihlangene ngenkathi ukubuyela emuva kungacishe kwenzeke.
3. Kudinga opharetha abahlobene nabaqeqeshiwe abaphezulu abangakwazi ukushayela izimoto ezikhethekile nemikhondo futhi babe nezimo zokubhekana nezingozi ezithile.
4. Izingozi eziphezulu zokuhamba. .Ngenxa yokulinganiselwa kwama-cargos akhethekile, kuzodala ukulahleka okukhulu kwezimoto kanye nama-cargos nanoma yikuphi okunye ukulahleka kwezomnotho okuqondile noma okungaqondile, yini enye, kuzothinta ngqo ukuqaliswa kweprojekthi uma kukhona ukunganaki ngesikhathi sokuhamba.
Izinkinga Ezingaba Zikhona Zokuhamba Ezindizayo Zempahla Yezwe
1.Ukuqinisekiswa kwesithiyo soMoya
Ngenxa yesisindo esiphelele semithwalo esindayo nemoto ethwele inkulu kakhulu, kudinga ukuhlaziywa kwedatha kanye nokulingiswa kwemigwaqo namabhuloho asendleleni. Ngokuhlaziya amandla angaphakathi ebhuloho namandla aphezulu angaphakathi akhiqizwa yizimoto ezidlula lapho, ukusebenza kahle komthwalo kuyadingeka ukubalwa okunquma ukuthi ngabe i-cargos ingadlula yini.
I-3.Trafficability ye-Turning radius
Ngenxa yomgwaqo omkhulu ophendukayo wezimoto ezisindayo zokuhamba ezithwala imithwalo, kungenzeka wedlule uma umsakazo womgwaqo umncane kakhulu noma umncane kakhulu.
Ngenxa yobude obude bamaloli aphethe nama-cargos asindayo, ukuvela okungatheni kwentengo yemaloli engemuva kwenzeka ngemuva kokulayisha, ngokusebenzisa ithambeka noma isigaxa sothango lwemoto efakwe emithambekeni emibili, kungadala ukulimala kwamaloli phansi noma ukuhlanekisela emuva ukwehluleka kokuguqulwa.
Izindleko zokuhamba eziseduze
Akufaki kuphela imali yokugibela imithwalo yemoto, kepha futhi nezindleko zokuphinda kuthathwe umgwaqo, ukuqiniswa kwebhuloho, ukukhishwa kothango lomoya, umgwaqo noma ukwakhiwa kwebhuloho.
Njengoba ijubane elihamba kancane lezimoto zokuhamba zilayisha ngama-cargos asindayo futhi kudingekile ngomsebenzi osizayo njengokufaka isicelo semvume yokuhamba ngomgwaqo ngaphambi kwesikhathi, ukwakhiwa komgwaqo noma ibhuloho, kuthatha isikhathi esengeziwe ukuletha.
1. Ukuphepha nokuthembela. Ngenxa yemithwalo esindayo nenani eliphakeme, umjikelezo wokukhiqiza wesikhathi eside, akukho okunye ukufaka esikhundleni, ukuphepha kuqala kufanele kube umhlahlandlela obaluleke kakhulu ngesikhathi sokuhamba
2. Ezomnotho. Khetha indlela efanele yokuhamba nemodi, indlela efanelekile yokuhamba yebhuloho kanye nendlela yokususa ukuvimba umgwaqo nokulawula izindleko zokuhamba kuze kufike lapho kuphephile khona.
3. Isikhathi. Ukuthuthwa kwemithwalo esindayo kungabandakanya ukusetshenziswa kweLayisense Lokuhweba Ngezithuthi, ukubekwa eceleni kwezithiyo zomgwaqo, ukwakha imigwaqo emuva, ukulawulwa kwezimoto kanye neminye imisebenzi yokulungiselela. Kungathinta nemishini enkulu yokuphakamisa isikhathi samanje esakhiweni sezokwakha .Ngakho lonke uhlelo lokuqhutshwa kwezithuthi kufanele lulawulwe ngokuqinile.
Izinzuzo ze-Sohologistics ze-Hard Cargo Land Transportation
Ngokungezelela umugqa okhethekile wohambo lukazwelonke olusezingeni eliphakeme, ukuthuthwa kobude obude, nobubanzi obunzima be-cargos sekuyibhizinisi eliphambili le-SHL.
Ama-Sohologistics enza kakhulu ibhizinisi lokuhambisa imithwalo esindayo yezemishini yezimboni, amandla we-hydraulic, amandla kagesi, amakhemikhali, imishini yokusebenza ngezinsimbi, imishini yokwakha ibhuloho yesitimela njengobude obude, ukuphakama obubanzi obukhulu, isisindo esiliqile nokunye okuhlobene. Isibonelo, umnyango nomuzi ukuthutha imithwalo esindayo ezweni lonke, umnyango ethekwini elikhulu laseShanghai, Tianjin, Lianyungang, Qingdao, Guangzhou naseShenzhen. I-SHL iphinde ibe nezinsizakalo zokuhamba komhlaba ukuya emachwebeni asemngceleni waseChina namazwe angomakhelwane, njengechweba laseManchurian, itheku lase-Erenhot, itheku laseHuoerguos, itheku le-kashgar, imigwaqo ye-Ulugqat, ichweba i-Alataw Pass, itheku le-Pingxiang esifundazweni saseGuangxi, itheku laseRuili esifundazweni saseYunnan, Ichweba laseBoten, i-Estuary Port nalo lifaka indlela ebuyela kuyo.
Uhla lwe-SHL lwemishini yezimoto eyakhelwe ngokwezifiso ifaka phakathi: I-Multi - axis lift kanye ne-splicing hydraulic flat semi - trailer, ipuleti yesitebhisi, i-Heavy duty concave semitrailer, ibhodi yokwandisa, ipuleti yohlaka, iphansi eliphansi kanye ne-super low-trailer iphaneli elincane ipuleti yokuhamba nge-blade., Zilungele zonke izinhlobo zobude obude, ububanzi obude obubanzi, ukuhamba kwe-cargos ngokweqile, njengomshini wokucindezela umshini womkhumbi, i-kettle ebude bude obukhulu, imishini yokubilisa ebanzi kakhulu, isitshalo esikhulu sokuxuba , imishini yokwakha insimbi eyeqile ngokweqile, i-wind Power tower Drum blade, ukwakheka kwensimbi, umshini we-centrifugal namanye ama-cargos asindayo, okusivumela ukwanelisa amakhasimende ethu ngomkhakha wamakhemikhali kazwelonke, amandla kagesi, insimbi yezitimela, ujantshi, ibhuloho, itheku, amaphrojekthi wokwakha umgwaqo omkhulu kanye nanoma yiziphi ezinye izinto ezisindayo zokuphakamisa ukuthwala nezidingo zokufaka.
Uphenyo lwamakhasimende nenqubo yokusebenza kwe-oda
1.Yenzelwe ukuhlinzeka ngemininingwane efanelekile yobude bemithwalo yobude, ububanzi, ubude, isisindo / isisindo, i-POL (port of loading), POD (port of discharge)
2. Ngemfuneko ejwayelekile yokulethwa kwe-cargos, umphathi wezinhlelo zephrojekthi we-SHL uzonikeza amanani entengo phakathi kwehora elilodwa.
Kwama-cargos akhethekile (ikakhulukazi ukuphakama nobubanzi obwedlula ibhuloho elijwayelekile), umphathi wezinhlelo ze-SHL uzokwakha ithimba leprojekthi kanye nabakhiqizi bokulungiswa komgwaqo ukuze bakwazi ukuphinda basebenzise umgwaqo, ukusebenzisa uhlelo lokuhambisa kanye nokunikeza isilinganiso sokugcina esinembile ngemuva kokucubungula ubukhulu be-cargos nezimo zomgwaqo ezihlukile
3. Uma isilinganiso sokwamukelwa ikhasimende, sizosayina isivumelwano sokubambisana kwezokuhamba phakathi kwethu. Noma ngabe kudingeka ukukhokha okuncane, kuya ngenani lemali ephelele yokuhamba.
4. Ngokuya ngosuku nendawo efanele, umshayeli weloli oqeqeshiwe uzofika endaweni ngesikhathi. Umphathi wezinto zokuhlinzekelwa kwemisebenzi we-SHL uzobhekana nokufakwa kokuphepha esizeni. Ngemuva kokubheka imininingwane yezimpahla enikezwe ikhasimende ne-cargos yangempela, uzobe ehlela ukukhuphuka, ukuqinisa nokubopha ama-cargos ngesikejana.
5. Umuntu ophethe ukuqondisa ukulayisha esakhiweni uzothatha izithombe zokulayisha, aqinise futhi abophe izimpahla futhi azithumele kumakhasimende, bese eqala ngokulethwa.
6. Inkonzo yamakhasimende e-VIP yezinto zakho izokwenza ukuma kwe-GPS yesikhathi sangempela kwezithuthi zokuhambisa futhi ithumele impendulo kuwe ngesikhathi esifanele.
7. Ekufikeni kwe-cargos lapho uya khona, umshayeli uzosiza umgqugquzeli ukuthi ahlole ukuqiniswa nokubopha ukubukeka kwe-cargos. Ngemuva kokudlula, kuzoqala ukungabeki imithwalo futhi ilayishe izimpahla, bese umgqugquzeli ezosayina ukutholwa kwamatoto bese enza irekhodi ngazo zombili izinhlangothi okusho ukuthi ukulethwa ngempumelelo kuqediwe.